သောကြာနေ့, မတ်လ 10, 2017 တနင်္လာနေ့မတ်လ 13, 2017 မိုဟာမက် Yasin
အမေဇုံကမင်းဘယ်သူလဲလို့မင်းကိုနောက်ဆုံးမေးခဲ့တဲ့အချိန်က။ သင့်အမေဇုံအကောင့်အတွက်ပထမဆုံးစာရင်းသွင်းတဲ့အခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ဒါငါထင်ထားတာပဲ!
သင်သည်သင်၏ Amazon အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်သည်နှင့် (သို့မဟုတ်သင်ဝင်ရောက်လျှင်၎င်းတို့ site သို့ဝင်ရောက်ပါ) ၎င်းသည်သင့်အားညာဘက်ထောင့်မှချက်ချင်းနှုတ်ဆက်လိမ့်မည်။ Amazon ကသင့်ကိုနှုတ်ဆက်ရုံတင်မကသင့်အကျိုးစီးပွား၊ browsing history နှင့်သင်၏ဆန္ဒစာရင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်များကိုချက်ချင်းပြသသည်။ Amazon က eCommerce စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တစ်ခုအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားလူသားတစ် ဦး ကဲ့သို့ပြောဆိုသည်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ပေါင်းစည်းသင့်သည်။
သင်သတိမပြုမိပါကဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာသည်အလွန်တိုတောင်းသောကာလမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုခုကိုသင်ဘယ်လောက်အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါစေ၊ သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုထပ်ခါထပ်ခါထည့်မိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ (သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပြီးနောက်) သင် eGuide ကို download လုပ်ပြီးနောက် eGuide ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သင့်အားအီးမေးလ်တစ်စောင်ရခဲ့လျှင်လည်းသင့်အချက်အလက်များကိုထပ်မံဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာအဆင်မပြေပါဘူး။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အားမျက်နှာသာပေးရန်တောင်းခံခြင်းနှင့်၎င်းက“ သင်သည်နောက်တဖန်မည်သူဖြစ်သနည်း” ဟုပြောခြင်းနှင့်တူညီသည်။ ဝဘ်ဆိုက် visitors ည့်သည်များအားပကတိသဘောဖြင့်စော်ကားခြင်းမဟုတ်သည်မှာသေချာသည် - သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာရှိသည်။
ရှေးရှေးလူများစွာလိုပဲကျွန်မမျက်နှာတွေကိုမှတ်မိရတာတကယ်ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်နာမည်တွေကိုမှတ်မိတာကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါအနာဂတ်အတွက်သတိရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တယ်။ သူတို့နာမည်ကိုမေ့သွားတယ်ဆိုတာငါတွေ့ရင်ငါဖုန်းထဲမှာချရေးလိုက်မယ်။ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအစားအစာများ၊ မွေးနေ့များ၊ ကလေးများ၏အမည်များစသည်တို့ကဲ့သို့အဆက်အသွယ်များ၌နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုချရေးရန်ကျွန်ုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည် - သူတို့အတွက်အရေးကြီးသောအရာ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား (ရိုင်းစိုင်းသည့်) ထပ်ခါတလဲလဲမေးစရာမလိုအောင်တားဆီးပေးသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်တစ်ခုခုအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မှတ်မိရန်သေချာပါသည်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်များသည်လည်းအလားတူပြုလုပ်သင့်သည်။
အခုကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုးသားပါရစေ။ အရာရာကိုချရေးရင်တောင်သိသာထင်ရှားတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ကြိုးစားပါကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှတ်မိရန်သင် ပို၍ အခွင့်အရေးရှိသည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်လည်းထပ်တူပြုသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်စားသုံးသူများနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်၊ သူတို့၏ယုံကြည်မှုရရန်နှင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုပိုမိုမြင်လိုလျှင်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်အထင်ရှားဆုံးသာဓကဖြစ်သော်လည်းအမေဇုန်သည်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားသောအသိစိတ်ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသော website မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းကိုကောက်ယူသောအဖွဲ့အစည်းများစွာရှိသည် သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီးဂရုစိုက်ပါစေ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးလွယ်လွယ်ကူကူရွေ့လျားသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီမှာ PERQ မှာငါတို့စသုံးတယ် မင်္ဂလာပါ - လုပ်ဆောင်ချက်တုံ့ပြန်ချက်များကိုaမှတစ်ဆင့်ရယူသောအစီအစဉ်တစ်ခု Net က Promoter ရမှတ် အီးမေးလ်မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရိုးသားစွာစဉ်းစားသောအရာများကိုပိုမိုနားလည်ရန်လိုသည်။ ရိုးရှင်းသောအပိုင်း ၂ ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်စစ်တမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီထံသို့ပေးပို့သည်။ ပထမအပိုင်းကဖောက်သည်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကို ၁-၁၀ ကနေစကေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုရည်ညွှန်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသတ်မှတ်ခိုင်းတယ်။ ဒုတိယအပိုင်းသည်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတုံ့ပြန်မှုကိုခွင့်ပြုသည် - အခြေခံအားဖြင့်ဝယ်ယူသူကထိုအဆင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သနည်း၊ သူတို့ကတင်သွင်းကိုနှိပ်ပါ, ဒါကြောင့်ပဲ! သူတို့၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ်အခြားအရာများဖြည့်စွက်ရန်နေရာမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးသူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိသင့်ပြီလေ။
သင်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိပြီးသင်နှင့်မည်သူဖြစ်သည်ကိုမေးမြန်းသူ ၆ လမှ ၆ လအထိဖောက်သည်တစ်ယောက်ကိုသင်အမှန်တကယ်သွားမည်လား။ မဟုတ်ပါ။ ဤအရာသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်မှုများမဟုတ်သော်လည်းသင့်၌ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောသတင်းအချက်အလက်များကို၎င်းတို့အားမေးမြန်းခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကို၎င်းတို့အားထပ်မံပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အားရောင်းလိုက်ခြင်းနှင့်တူသည်ဟုခံစားရခြင်းနှင့်မှတ်မိခြင်း၊ သင့်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ပြီးပြီဟုငါပြောနိုင်သည် ။ မင်းငါ့ကိုသိပြီးတဲ့အခါငါဘယ်သူလဲဆိုတာမမေးပါနဲ့။
ဒါဆိုရင် AskNicely ကိုပြန်သွားပါ။ ဝယ်သူကအီးမေးလ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် 1-10 အကြားနံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးထပ်မံတုံ့ပြန်ချက်ပေးသည်။ ထိုအချက်အလက်များကိုထိုစစ်တမ်းကောက်ယူသည့်အဖွဲ့သို့လွှဲပြောင်းပေးပြီးထိုတွင်အနာဂတ်တွင်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ရမှတ်ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ပရိုဖိုင်းကိုပူးတွဲထားသည်။
သင်ဟာစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ်သင်က eCommerce စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမှသိတဲ့အခွင့်အလမ်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်မင် ဟုတ်တယ် မင်းမသိဘူးဆိုရင်မင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းပုံစံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ရဲ့ဝေါဟာရတွေပါ။ ပလက်ဖောင်းသည် (AskNicely ကဲ့သို့) ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည့်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်သွားမည်။
အချိန်ပို,မင် static ပုံစံများကိုဤမျှလောက်ရိုးရှင်းမဖြစ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ ပလက်ဖောင်း၏အမြင်အာရုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းရှုထောင့်များနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်းအသုံးပြုသူများကိုပုံစံများပြသပုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်ယခင်ပုံစံ (သို့မဟုတ်ပုံစံ၏ယခင်အပိုင်း) ကိုမည်သို့ဖြည့်သည်ကို မူတည်၍၊မင် အသုံးပြုသူကိုအဖြေအများဆုံးပေးမည့်မေးခွန်းများကိုပြသရန်“ Condition Formatting” ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ၊ အချို့သောမေးခွန်းများကိုလုံးဝကျော်သွားနိုင်သည်။ “ Condition Formatting” သည်ပုံစံဖြည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ပြီးစီးမှုနှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ တော်တော်အေးတယ်ဟုတ်လား
အခုလက်ရှိဖောက်သည်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတိုင်းအတာအထိမင် အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည် -“ လူ ဦး ရေပျံ့နှံ့ပုံစံပုံစံများ” ။ ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ရှေးရှေးတုန်းကမင်းတို့ဟာသူတို့နဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုမေးဖို့ဆိုတာမခက်ဘူး။ အဲဒါလိုက်တယ် ၎င်းသည်သင်က“ ထူးဆန်းတယ်” ဟုမထင်ပါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှ visitors ည့်သည်များသည်သူတို့၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်အားလုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါဖြည့်ရန်မလိုပါ။ သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်သောရှေးရှေးများအတွက်စားသုံးသူအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုစာသားပုံစံတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးယူရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပုံစံအားလုံးကိုပြသခြင်းမရှိသကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကောင်းမွန်သောအစလည်းဖြစ်သည်။
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာထူးခြားသောအသုံးပြုသူ (သို့) ဖောက်သည်ထံသို့ပုံစံကိုထူးခြားသည့်ထူးခြားသောပုံစံ URL ကိုပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ဤ URL များကို“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” အီးမေးလ်တွင်တွေ့လေ့ရှိပြီးနောက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းများသို့မကြာခဏညွှန်ကြားလေ့ရှိသည်။ နာမည်၊ အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရန်နေရာတစ်ခုအစားပထမမေးခွန်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမနိဒါန်းရှိပါတယ် - ရုံအဓိပ္ပါယ်ရှိသော interaction က။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမဟုတ်ပါနေစဉ် Xbox အသုံးပြုသူ၊ လူများစွာကိုကျွန်ုပ်သိတယ်။ ကျွန်တော့်အဖွဲ့ ၀ င် Felicia (PERQ ၏အကြောင်းအရာအထူးကျွမ်းကျင်သူ), မကြာခဏအသုံးပြုသူသည်။ Felicia သည်ဂိမ်းများတွင်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုအပြင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းပြီးကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသည့် Xbox One ၏လက်ရှိအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ကိုနှစ်သက်သည်။
Xbox (သို့မဟုတ် PlayStation ပင်လျှင်) ကိုအသုံးပြုသည့်အခါမတူညီသောအသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားရန်နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်နှစ်မျိုးစလုံးတွင် gamer ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ထုံးစံရှိသည်။ ဤ gamer ပရိုဖိုင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေမှုမှာ Xbox interface သည်သင့်ကိုလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ သင် ၀ င်သည်နှင့်ချက်ချင်းပင်၊ “ မင်္ဂလာပါ Felicia!” နှင့်စာသားအတိုင်းနှုတ်ဆက်သည်။ သို့မဟုတ် "ဟိုင်းမိုဟာမက်!" ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် (သင်ထွက်ခွာသောအခါသင့်အား“ နှုတ်ဆက်!”) ပြောလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အားအမှန်တကယ်သိသည့်အလားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ Xbox အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်သည်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ သင်၏ဂိမ်းရမှတ်များအားလုံးနှင့်သင်၏လက်ရှိသူငယ်ချင်းအားလုံးစာရင်းနှင့်အတူထူးခြားသော dashboard တစ်ခုရှိသည်။ ဒီပလက်ဖောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးဂရုစိုက်တာကအတွေ့အကြုံကိုထူးခြားပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာအားလုံးကိုပြသခြင်းနှင့်အတူ၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည်အတွေ့အကြုံပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသည်။
Felicia ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့သူမမှာဂိမ်းနှင့် app အကြံပြုချက်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်တယ်၊ သူမကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟုတ်ဘဲသူ့သူငယ်ချင်းများလက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်အရာပေါ်မူတည်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဂိမ်းစက်အများစုမှာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်၊ သုံးစွဲသူအမြောက်အများဟာအလားတူစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိကြတဲ့အတွက်အသုံးပြုသူများအားအသစ်သောအရာတစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ Felicia ကသူမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများဟာ Halo Wars2ကိုကစားနေတယ်ဆိုတာသိရင်သူမကသူတို့နဲ့အတူကစားနိုင်အောင်ဒီဂိမ်းကိုဝယ်ချင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူသည်ဂိမ်း၏ပုံကို နှိပ်၍ ဂိမ်းကို ၀ ယ်ရန်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ကစားရန်သူ၏ပရိုဖိုင်းတွင်သိမ်းထားသောကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲပုံစံဖြင့်ပြည့်နေသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှည်လျားသော၊ ရှည်လျားသောလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သွားရန်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ “ ပိုက်ဆံယူပြီးအပြေး” တဲ့အလေ့အကျင့်ရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိနေတုန်းပဲ။ သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရနေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲဒီစားသုံးသူတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့တက်ကြွစွာမကြိုးစားဘူး ငါလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း PERQ တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမှတစ်စုံတစ်ရာသင်ယူခဲ့ပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်သည့်အခါစားသုံးသူများပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်။ စားသုံးသူများသည်ကြိုဆိုလိုကြသည် - သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့ကိုနားလည်စေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူများရှေ့သို့တိုးတက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနားလည်လေ၊ သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်၍ စီးပွားရေးလုပ်ရန် ပို၍ များလေလေဖြစ်သည်။
Muhammad Yasin သည် PERQ ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ (www.perq.com) နှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူစာရေးဆရာဖြစ်ပြီးရိုးရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်ရလဒ်များကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံကြော်ငြာခြင်းကိုအခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ သူ့အလုပ်ကို INC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb နှင့် Buzzfeed စသည့်စာပေများတွင်ထူးချွန်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ သူ၏စစ်ဆင်ရေး၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၌သူ၏နောက်ခံသည်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဖြည့်ဆည်းရန်အချက်အလက်အခြေပြုချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်။